China Dental ụlọ nyocha, Dental ụlọ nyocha, Dental ịkụbanye, okpueze Ma Bridge - Foo Tian
Anapụta mba quality eze laabu ọrụ
Inye nlereanya onye ọrụ
Jiri naanị OA ma ọ bụ FDA mma ihe
CAD cam ịkụbanye
Kama nke etinye na nēfe maka metal Ọdịdị nke zuru njiko ịkụbanye akwa, anyị na-eme na-metal Ọdịdị nke ahụ zuru njiko ịkụbanye akwa na CAD cam ụzọ, ọ na-milled site igwe, nke nwere ike ime ka n'aka na elu nkenke na izi ezi. Ọ-esi na-karị kpọmkwem, dị ka mgbe ọ dabara nnọọ enweghị ihe ọ bụla obere mgbanwe.
CAD cam Malo Full Njiko ịkụbanye Bridge
CAD cam Malo ịkụbanye Bridge
Full Njiko Zirconia ịkụbanye Bridge
Full Njiko ịkụbanye Bridge
Ịkụbanye Surgery Guide
Ele All CAD cam ịkụbanye
Screwed nọgidere ịkụbanye okpueze mere na dijitalụ iṅomi faịlụ. Anyị nwere ike ọ bụghị nanị na-eme ka okpueze na àkwà mmiri na ot ụzọ, ma nwere ike ime ka na elu uzo na dijitalụ iṅomi faịlụ. Nke a bụ nnọọ adaba n'ihi na ma ụlọ na ndị ọrịa, dị ka ụlọ na-adịghị mkpa iji silicone amụta ka ha na-eme ya, kama ọ bụ naanị iri iṅomi faịlụ site na ọrịa ọnụ, na ndị ọrịa ga-enweghị nnukwu silicone echiche trays etinye n'ime ha n'ọnu-ha.
Model Na echiche iṅomi
Zuru okè End N'ihi
Ele All Digital
Ị na-ata ahụhụ site mkpumkpu ezé na Ihere na-egosi gị ezé? Ị chọrọ zuru okè na ọbụna ezé? Ugbu a ndị uzo tree mere Foo Tian Dental ụlọ nyocha si Shenzhen China nwere ike inyere gị aka. The uzo tree ọgwụgwọ na-agụnye ihe orthodontist ma ọ bụ dọkịta ezé, ma ọ bụ na home dabeere na usoro, onye onwe ha, na-ewere a ebu nke ọrịa na-ezé, nke a na-eji creat a digital nha nha iṅomi. The kọmputa nlereanya na-atụ aro nkebi n'etiti ugbu a na chọrọ ezé ọnọdụ, na trays na-kere ọ bụla ogbo. Nọmalị ọ bụla uzo tree ga-weared 1 ma ọ bụ 2 izu, mgbe ahụ dochie ya ọzọ. Mgbe yi niile trays, mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta na-eju ikpeazụ n'ihi na ọbụna ezé na zuru okè ọnụ ọchị. Ọ bụ kpam kpam uzo, nke na-eme ha ihe ndị ọzọ nwekwara uche karịa metal nkwado. Ndị mmadụ ga-adịghị achọpụta ha.
Uzo tree ọgwụgwọ
Ị chọrọ zuru okè na ọbụna ezé?
Ugbu a ndị uzo tree mere Foo Tian Dental ụlọ nyocha si Shenzhen China nwere ike inyere gị aka.
Ele All Wụnyenụ Ele Mmadụ Anya n'Ihu
Full Efere Crown
A zirconia okpueze bụ a na-ewu ewu ụdị ihe niile na-seramiiki crownwhich na-eyi ka mma ọdịdị a toothwhich aghọwo ntụpọ ma ọ bụ nkwarụ karịrị afọ. Ha na-inogide, mfe na-eyi na-adịte aka.
Full ngwe Zirconia
Zirconium okpueze Ị Ga-ofu Iji Traditional Dental cements
Full ngwe Zirconia Crown
Zirconia bụ metal-free, nke na-egbochi agbawanye ọchịchịrị gburugburu gingival ebe
Ele All Full Efere Crown
ịkụbanye ịwa ndu
CAD cam Malo ịkụbanye akwa
acryli eze, All Efere NYEGHACHI, Efere nkanka, Built In Micro Motor, Woodworking Machine, Dental Instruments,